ALT र TAB को शक्ति | Martech Zone
ALT र TAB को पावर
बिहीबार, मार्च ० 25, २०२० सोमबार, जनवरी 1, 2018 रबी स्लटर
जब यो कम्प्युटर टेक्नोलोजीको लागि आउँदछ, म छक्क पर्दछु कि कतिजना व्यक्तिहरू तपाईंको कुञ्जीपाटीमा दुई सब भन्दा महत्वपूर्ण बटनहरूसँग आत्मीय रूपमा परिचित छैनन्। ALT र TAB को अद्भुत शक्तिले जो कोही जसले कम्प्युटरको प्रयोग गर्दछ वा उनीहरूको व्यवसायलाई बढावा दिन वा संचालन गर्नका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण उत्पादकत्व सल्लाहहरू समावेश गर्दछ। अर्को शब्दहरु: व्यावहारिक सबै अब Martech पढ्न!
वास्तवमै ALT + TAB संयोजन बुझ्नको लागि, हामीले ALT कुञ्जीको छलफलबाट सुरू गर्नु पर्छ। तपाईंलाई थाहा छ "ALT" छोटो छ "वैकल्पिक" को लागी। यसको मतलब यो सानो सानो बटन हालको प्रयोगकर्ता इन्टरफेसको सम्पूर्ण प्रकार्य बदल्नको लागि हो। कम्प्युटर विजार्डहरू कहिलेकाँही यसलाई "मोड स्विचिंग" भन्ने गर्छन्। "ALT" कुञ्जी थिच्नाले मेसिनलाई व्यवहार गर्न भन्छ पूर्ण रूपमा भिन्न वर्तमान मा भन्दा यो।
यो ओभरड्रेमेटिक लाग्न सक्छ। जे भए पनि, शिफ्ट कुञ्जीले पहिलो नजरमा मूल रूपले उस्तै गर्न देखिन्छ। तर शिफ्टले केवल माथिल्लो देखि तल्लो केसमा अक्षरहरू परिवर्तन गर्दछ। "A" मूल रूपमा "a" जस्तै हुन्छ। वास्तवमा पुरानो टाइपराइटरहरूले दुबै अक्षरका प्रतिलिपिहरू राखेका थिए। "ALT" कुञ्जीले तपाइँको मेसिनलाई नयाँ संसारमा लैजान्छ।
एकल ALT + ट्याब
यस्तो लाग्न सक्छ जस्तो तपाईले ALT मा ठट्टा गर्दा केही पनि हुँदैन। एक दर्जन पटक कुञ्जी थिच्नुहोस् र छोड्नुहोस् र विन्डोज वा म्याक मेसिनले कुनै प्रतिक्रिया दिनेछैन। तर यदि तपाइँले ALT कुञ्जी तल समात्नुहुन्छ र त्यसपछि भेट्नुहोस् र TAB कुञ्जी एक पटक मात्र थिच्नुहोस् र त्यो ट्याब कुञ्जी छोड्नुभयो भने, तपाइँले एउटा विन्डो देख्नुहुनेछ। यसले सबै सक्रिय अनुप्रयोगहरूको सूची दिन्छ, र तपाईंले फेला पार्नुहुनेछ सूचीमा अर्को एक हाईलाइट गरिएको छ। जब तपाइँ ALT छोड्नुहुन्छ, तपाइँ तत्कालै त्यो कार्यक्रममा स्विच हुनुहुनेछ।
ALT + TAB को पावर एक्लो उत्पादन क्षमता सुधार गर्न सक्दछ। तपाईंले आफ्नो हातहरू किबोर्डबाट हटाएर माउसमा सार्नु आवश्यक पर्दैन यदि तपाईं दुई खुल्ला अनुप्रयोगहरू बीच परिवर्तन गर्न चाहानुहुन्छ भने। अब यो प्रयास गर्नुहोस्। ALT + TAB कस्तो लाग्छ थाहा पाउन केही मिनेट खर्च गर्नुहोस्।
यदि तपाईंले एकल ALT + TAB लाई ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने, तपाईंले चिन्नुहुनेछ कि यो वास्तवमा बीचमा स्विच हुन्छ वर्तमान अनुप्रयोग र अन्तिम प्रयोग गरिएको अनुप्रयोग यसको मतलब यो हो कि यदि तपाइँले भन्न सक्नुहुन्छ, तपाइँको वेब ब्राउजर तपाइँको वर्ड प्रोसेसरमा ALT + TAB को साथ, तपाइँ स्विच गर्न सक्नुहुनेछ फिर्ता अर्को ALT + TAB को साथ। यी सबै पछाडि पछाडि स्विच गर्दा समयको बर्बाद जस्तो लाग्न सक्छ, तर यो हो ठ्याक्कै हामी सबै के गर्छौं जब हामी अनुसन्धान र लेखन गर्दैछौं। ALT + TAB प्रत्येक दिन कार्यप्रवाहको लागि उत्तम छ।
केही सेकेन्ड बचत गर्दा तपाईंको हातलाई माउसबाट पछाडि र अगाडि सर्दैमा सायद धेरै जस्तो देखिँदैन। हरेक घण्टा सयौं स्विचहरू गुणा गर्नुहोस्। विचार गर्नुहोस् कि जब तपाईंले आफ्नो परिधीय दर्शनको साथ माउस फेला पार्नुभयो र स्क्रिनको तल र पछाडि कर्सर तल तान्नुपर्‍यो भने तपाईंले ध्यानका साथ आफ्नो ध्यान गुमाउनुहुन्छ। एकल ALT + TAB मास्टरिंगले नाटकीय रूपमा तपाईंको उत्पादकता परिवर्तन गर्दछ।
उन्नत ALT + TAB
त्यहाँ केवल आधारभूत कुराहरू भन्दा बढि छ। यदि तपाइँ ALT + TAB थिच्नुहुन्छ तर ALT बटन होल्ड गर्नुहोस्, तपाइँ सक्रिय अनुप्रयोगहरूका सबै आईकनहरू देख्नुहुनेछ। तपाईले TAB कुञ्जीको बारम्बार प्रेसहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रमहरूमा फेरि सर्कल गर्न तपाईंले केही समय अघि प्रयोग गर्नुभयो। SHIFT + TAB को संयोजन विपरित दिशामा जान्छ।
यदि तपाईंले कहिले आफैंले प्रोग्रामबाट अर्को प्रोग्राममा कुञ्जी स्ट्रोकको साथ डाटा प्रतिलिपि गरिरहनुभएको छ भने, ALT + TAB ले तपाईंको अनुभवलाई प्रयोगको एक बनाउन सक्दछ मात्र किबोर्ड यसले महत्वपूर्ण उत्पादकता सुधार गर्न सक्दछ।
ALT + TAB जान्नको लागि केहि समय लिनुहोस्। तपाईं मेशिनको साथ छिटो हुनुहुनेछ र अझ धेरै काम गर्न सक्नुहुनेछ। तर अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, पहिचान गर्नुहोस् कि कुञ्जीहरू वास्तवमै बारेमा हो मोड परिवर्तन गर्दै हाम्रो वरपरका प्रणालीहरूको। ALT तपाईको डेस्कमा काम गर्नु र फोनमा कुरा गर्नु बीचको भिन्नता हो। यो फरक राज्यमा स्विच गर्ने बारे हो।
संदर्भ-स्विचिंग उत्पादकत्वको सबैभन्दा ठूलो लागत हो। प्रत्येक अवरोधले तपाइँ के गरिरहनुभएको थियो बिर्सने अवसर प्रदान गर्दछ। तपाइँ के गर्नुहुन्छ भनेर बाहिर निकाल्नुहोस् तपाइँको फोकस परिवर्तन गर्न आवश्यक छ, यदि यो किबोर्डबाट माउसमा छ भने। तपाईंले आफ्नो कार्यप्रवाह सहजै पाउनुहुनेछ र तपाईंले अधिक काम पाउनुहुनेछ।
टैग: Alt ट्यागटाइपराइटर
के ठूला अनुयायीहरू साँच्चै गन्ती गर्छन्?
मार्क्स 25, 2010 मा 4: 32 PM
एक सहकर्मीले एक पटक मलाई 'माउस अपंग' भने किनभने मैले नेभिगेट गर्नका लागि सँधै ग्राफिकल यूजर इन्टरफेस प्रयोग गर्थें। कुञ्जी सर्टकटहरू कत्तिको कुशल छन् भनेर मैले थाहा पाउन अघि यसले केहि बर्ष लियो। चाखलाग्दो कुरा के हो भने, म विश्वास गर्दछु कि म्याक प्रयोगकर्ताहरूलाई सँधै कस्टम कीस्ट्रोकहरू छन् जुन राम्रो चीजहरू गर्दछन्। विन्डोज समातिएको छ - तर म्यासमा मेरा धेरैजसो साथीहरू सबै सर्टकटहरू जान्नमा उत्कृष्ट छन् ... र तिनीहरूको उत्पादकताले यो देखाउँदछ!
नुरहान सेफ एल नस्र
नोभेम्बर,, २०१ at 16::2012 बिहान
राम्रो लेख जुन मलाई थाहा छ कि म एक अनभिज्ञ पीसी प्रयोगकर्ता हुँ